Ime a zuru okè Halloween ugu kwesịrị ịbụ otu nke dị oké mkpa na oge ịgbachi a zuru okè Halloween ọzọ. N'ihi na ụmụaka, na-eme ihe na ha onwe ha bụ ihe ndị ọzọ dị mkpa karịa enye ha ihe nne na nna. Kụziere ha otú ka a Halloween ugu ma ọ bụ mee a adịgboroja Hand Halloween uzommeputa mgbe ahụ na-egwu a ugu golf egwuregwu. Ihe a na ebe nchekwa ma ọ bụrụ na e dere dum ụbọchị? Echefukwala dezie ya ka a Halloween video. E nwere otutu Atụmatụ na usoro na-eduzi gị esi mee ka a Halloween ugu, ma ọ dịghị onye n'ime ha nwere ike na-agụnye ọ bụla akụkụ dị ka nke a ndu.
1. Họrọ a ugu & Dị Iche Iche Size / shapes maka dị iche iche Ọrụ
Halloween na-abịa. Nta ọ bụla ụlọ ahịa ga-akwadebe ụfọdụ àgwà pumpkins n'ihi na ị na bulie. Dị ka dị iche iche na-arụ ọrụ na ị chọrọ ka, ị pụrụ ịzụta ụfọdụ dị iche iche na nha na shapes. Ka ihe atụ,-ekwu, ị ga-bulie a gburugburu-size ugu enweghị ihe ọ bụla visual mmebi ma ọ bụ akara. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ usoro a ekwensu ihu, na-agbalị ihe elliptical ma ọ bụ zita na tụrụ.
2. ebipụ Top na Knifes & otú na-ya ịda Down
Green-aka nwere ike ime ka a ndudue mgbe ebipụ n'elu na knifes ọ bụrụ na ọ he ya n'ụzọ kwụ ọtọ, nke ga-ada n'ime enweghị ihe ọ bụla nkwado. Ya mere, ndị kasị mma ngwọta bụ bee ya na otu mmụọ ozi dị ka 45 ogo. Biko mara na ntinye ị bee kwesịrị nnukwu ezuru gị otu aka ma ọ bụrụ na ị na-apụghị jide n'aka na size, ị nwere ike ise na welara pen mbụ.
3. oghere ugu na spoons & Olee iji chebe ya iji mee ka ọ-adịru ogologo
Ugbu a ịhụ gị ice ihuenyo ngaji na-amalite oghere ugu si nwayọọ nwayọọ. Ọ bụghị ike efu ihe niile n'ime, mgbe ọzọ ihe dị mkpa bụ na-edebe ya si ire ere na adabara ngwọta. Ọ bụ anya na mbepụ nke ugu ga-ọchịchịrị n'ihi nke ọxịdashọn na ọ bụ ire ere mgbe ọtụtụ ụbọchị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-ọ ọhụrụ na emebibeghị udi, ebe a bụ ngwọta.
a. Ete ụfọdụ Vaseline na ọnwụ n'elu na-edebe ya si ọxịdashọn
b. Sterilaiz na Blench n'ime na igbu dịkwa ka usoro, ebu, nje bacteria, chinchi
c. Mechie ebupụta na plastic akpa iji gbochie ihicha na-esi ọhụrụ "obere buggers" ma belata ihicha (Ị pụrụ ileghara a nzọụkwụ ọ bụrụ na ị dị nnọọ ka a ugu ụbọchị tupu Halloween, ego nkọwa iji chebe ya na-eme ya ikpeazụ aba ebe a.)
4. usoro Style dị iche iche na ihe nakawa etu esi
Ka-awụlikwa elu ka akụkụ kasị mkpa - usoro na bee a ugu. Tupu eme ihe ọ bụla, ị kwesịrị ị chepụta ihe nakawa etu esi mbụ. N'ihi na beginners, ị nwere ike họrọ ụfọdụ mfe ma dị mfe na-usoro ihe nakawa etu esi, nke na-achọkwa na edoghi kama okirikiri. E biri ebi ha ma na-enweta ya na-ugu elu. Abù si na akara na toothpicks. Ebe a bụ ụfọdụ Halloween ugu tụrụ atụ na echiche maka gị akwụkwọ:
a. Okwu ugu, nke na-eji ọtụtụ ndị mmadụ. Ọ mere na ụfọdụ mfe shapes dị ka kpakpando, triangle na ọnwa.
b. Enye ìhè Fall Leaf ugu, nke a na gosiri dị iche iche na epupụta. Ọ bụghị a kwesịrị ka usoro a ugu na mmadụ ma ọ bụ ekwensu ihu. Osisi dị ka ifuru, epupụta ma ọ bụ osisi nwere ike-gaa na akaụntụ.
c. Animal ugu, bụ nke yiri na osisi ugu. Ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ụmụ anụmanụ dị ka cat, nkịta ma ọ bụ ọkụkọ na-amasị gị na mgbe ahụ usoro ya na mfe edoghi.
d. Mọ ugu / Ekwensu ugu, nke ahụ bụ ihe ndị kasị mmasị imewe. Otú ọ dị, ọ bụ adịghị mfe n'ihi na beginners na i nwere ike mkpa na-agbalị ọtụtụ ugboro.
e. Ụkpụrụ ugu, nke ka na imekwa nakawa etu esi. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-amasị triangle udi, ị nwere ike usoro dị iche iche triangle akpụzi reputably.
Ọzọ Halloween ugu curving echiche, biko ego ebe a.
5. Bee si na kwụsị ịtụ ngwá ọrụ dị ka sikruuokwomoto & Atụmatụ
Mgbe Ekwenyere ụkpụrụ, i nwere ike mkpa iji a kwụsị ịtụ ngwá ọrụ dị ka sikruuokwomoto. Na-akụkụ obere ma na-oge gị bụ isi. Ọtụtụ ndị na-ada na a nzọụkwụ n'ihi nchegbu. Image ndị mara mma idaha mgbe gị na ụmụ ga-esi onyinye a, ị ga-enweta ihe ndabere n'ime.
The ikpeazụ nzọụkwụ bụ na-etinye ìhè. My aro bụ ịkwadebe na ìhè ìhè tupu ya etinye n'ime. Ị nwere ike mkpa a iko na-ekpuchi ìhè mbụ mgbe udo na mgbe ahụ, tinye ya n'ime na ogologo pincers ma ọ bụrụ na naanị ntinye bụ n'elu. Tụkwasịzie ugu bụla ị chọrọ.
1. Echefukwala itinye a akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ agadi ákwà n'okpuru a ugu n'ihi na ọ bụ n'ezie a imetosi arụ ọrụ iji mee a Halloween ugu.
2. Ọ bụrụ na ugu ike iguzo anụ, i nwere ike ebipụ na elu na ala abụọ.
3. eme adịghị n'elu-oké ọchịchọ ma na-oge gị. Chebe gị aka site ịcha.
Ngwaọrụ i nwere ike mkpa:
A Ice ihuenyo ngaji
Vaseline, Plastic akpa na Blench
Kwụsị ịtụ ngwá ọrụ dị ka sikruuokwomoto
Long Pincers na Ìhè
Halloween Party Ideas: Top 5 Halloween Ezi ntụziaka maka Kids
Top 10 Adobe Premiere Plugins maka dị iche iche mmetụta na ikwu n'ụzọ
Get The Best Perian Alternative maka Mac (Yosemite gụnyere)
Olee otú Mee HTML Photo osisi maka weebụsaịtị
Olee otú Download CBS Videos Na a Click
> Resource> Video> Olee otú Mee a Halloween ugu maka Beginners